The Tutor: Vaovao An-tsekoly amin'izao fotoana izao
Lahatsoratra farany nataon'ny staff editorial
EcoBank fandraisana mpiasa 2021/2022 Fampiharana taratasy fangatahana
Filed in Job by Staff editorial tamin'ny Jolay 28, 2021	• 50 Comments
EcoBank fandraisana mpiasa 2021: maniry hiasa ao amin'ny Ecobank Plc amin'ity taona ity ve ianao? Raha eny dia tsy manana ahiahy ianao. Ity pejy ity dia hitarika anao amin'ny dingana tsirairay amin'ny fomba fangatahana asa Ecobank any Nizeria ho an'ny nahazo diplaoma sy mpianatra. Hahafantatra momba ny famaritana ny asa Ecobank, ny fahaizan'ny fampiharana, ny fepetra takiana ary […]
Tohizo ny famakiana »
UNIOSUN Fizarana fizahana mari-pahaizana momba ny fidirana 2021/2022
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Staff editorial tamin'ny Jolay 28, 2021	• 1 Comment
Forme Screening Admission UNIOSUN: University of Osun State, UNIOSUN dia mivarotra ny taratasy fangatahana fisoratana anarana ho fidirana Direct UTME sy Direct Entry ho an'ny fotoam-pianarana 2020/2021. Manohiza mamaky raha hijery antsipiriany bebe kokoa etsy ambany. Ampahafantarina ny besinimaro fa ny Form UTME sy ny Form Entry mivantana fampiharana Forms ho an'ny fidirana ao amin'ny fandaharam-pianarana undergraduate […]
Kalandrie Akademia ACEONDO Fanavaozana ny Siansa Akademia 2021/2022
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Staff editorial tamin'ny Jolay 28, 2021	• 0 Comments
Adeyemi College of Education, Ondo, ACEONDO dia nanamboatra kalandrie akademika ho an'ny ambiny semester voalohany, fotoam-pianarana 2020/2021 mbola tsy nivoaka. Jereo ny antsipiriany tamin'ny taon-dasa etsy ambany Ny famoahana ny oniversite Adeyemi of Education, Ondo State (ACEONDO) dia namoaka ny tetiandrom-pianarana ho an'ny Harmattan sy Rain Semester amin'ny fotoam-pianarana 2020/2021. Na izany aza, […]
UNIOSUN Post UTME 2021/2022 Forme Screening, Eligibility and Deadline
UNIOSUN Post UTME 2021: Osun State University, UNIOSUN dia maniry hampandre ny kandidà maniry rehetra fa efa navoaka ny taratasy fidirana Post UTME sy Direct Entry ho an'ny fivoriana akademika 2020/2021. Ireo mpangataka liana dia tokony hanaraka ny lisitry etsy ambany raha te hahomby amin'ny fampiharana. Ampahafantarina ny besinimaro fa ny fanazaran-tena momba ny Post UTME sy ny Direct Entry […]
UNIOSUN Post UTME / DE endrika fanavaozana ny vavahady fizarana fizarana fizarana 2021/2022
UNIOSUN Post UTME Form: Osun State University, UNIOSUN Post UTME ary ny fidirana mivantana fidirana dia azo alaina ary amidy amin'ny fotoam-pianarana 2020/2021. Ireo mpangataka liana dia tokony hanaraka ny lisitry etsy ambany raha te hahomby amin'ny fampiharana. Ampahafantarina ny besinimaro fa ny Form UTME sy ny Form Fampiharana fanatanjahantena mivantana fidirana ho an'ny […]
Fandraisana an-tanana ny fampiharana ny mpitandro ny filaminana any Nizeria 2021/2022
Filed in Job by Staff editorial tamin'ny Jolay 28, 2021	• 407 Comments
Nivoaka ny endrika fandraisana mpiasa nataon'ny polisy any Nizeria 2021! Ianaro ny fomba fangatahana fisamborana polisy Nizeriana 2021/2022 ho an'ny toerana rehetra. Ny fandraisana mpiasa ho polisy ao Nizeria dia misokatra ho an'ireo manana mari-pahaizana WASSCE / GCE / NECO / NABTEB. MAIMAIMPOANA tanteraka ny fampiharana. Ny fandraisana mpiasa ho polisy ao Nizeria (NPF) dia efa nandrasana mialoha eto amin'ny firenena. Noho izany, nahazo fangatahana marobe izahay […]
Fandraisana Login NPF Fandraisana Login www.policerecruitment.ng 2021/2022 Vaovao farany
Filed in Job by Staff editorial tamin'ny Jolay 28, 2021	• 1 Comment
Ny NPF Recruitment Portal Login 2021 dia mbola tsy nivoaka. Ity pejy ity dia noforonina miaraka amin'ny tanjona tokana hanampiana ireo andrasan'ny Nizeriana maniry mafy hahafantatra hoe rahoviana no hivoaka amin'ny Internet ny fangatahana fandraisana mpiasa ny Polisy Nizeriana (NPF). Tohizo ny famakiana ity pejy ity fa ho azonao bebe kokoa momba ny torolàlana momba ny fampiharana mpitandro ny filaminana Nizeriana […]
UNILORIN Fandraisana fidirana an-tsokosoko / Fidirana an-tsekoly mialoha ny diplaoma 2021/2022
Tapaka ny FUTA Marka 2021/2022 sy ny teboka fanapahana departemanta
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Staff editorial tamin'ny Jolay 28, 2021	• 159 Comments
FUTA Tapaka ny Marka: University of Technology Akure Federal, FUTA dia nanambara fa tapaka ny fidirany amin'ny fotoam-pianarana 2020/2021. Manohiza mamaky raha hijery antsipiriany bebe kokoa etsy ambany. Ny fitantanana ny Federal University of Technology, Akure (FUTA) dia namoaka ny marika fanapahana departemanta ho an'ny fampiharana fidirana akademika 2020/2021. Misy ny […]
Ny saram-pianarana amin'ny oniversite Veritas 2021/2022 ho an'ny mpianatra vaovao sy miverina
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Staff editorial tamin'ny Jolay 27, 2021	• 0 Comments
Ny fandaharam-pianarana an-tsekoly Veritas University ho an'ny fotoam-pianarana 2020/2021 dia nivoaka ary navoakan'ny mpitantana ny sekoly ho an'ireo mpianatra vaovao sy miverina. Jereo ny antsipiriany etsy ambany. Ity dia hampahafantarana ny mpirotsaka UTME sy Direct Entry izay natolotra fidirana vonjimaika tao amin'ny Oniversite Veritas ho an'ny fotoam-pianarana 2020/2021 izay fitantanan'ny […]
Citibank Nigeria Limited Recruitment 2021/2022 Jereo ny fanavaozana ny fampiharana
BBN 2021 Lehilahy mpiray trano - Fantatrao ve ny momba azy ireo?
MTN Nigeria fandraisana mpiasa Portal 2021 www.mtnonline.com
MTN Nigeria fandraisana mpiasa 2021/2022 Portal momba ny fangatahana ankehitriny
www.policerecruitment.gov.ng Portal an'ny polisy 2021 Jereo ny Portal Application NPF
Portal fandraisana mpiasa ho an'ny mpampianatra Lagos State 2021 www.lagosstate.gov.ng
Fampidirana mpampianatra any amin'ny fanjakan'i Lagos 2021/2022 Form Form Application SUBEB
FPI HND ao amin'ny Tranomboky sy Fampidirana Siansa Fampahalalana 2021/2022 Session
Kalandrie Akademia nohavaozina ACEONDO Fivorian'ny Akademia 2021/2022
Torolàlana momba ny fampiharana ny polisy any Nizeria 2021/2022
Courses sy fepetra takiana amin'ny oniversite VERITAS | Lisitr'ireo fampianarana natolotra
Internship 7 tsara indrindra any Alemana ho an'ny mpianatra indiana 2021